Ozi ngwaahịa Fiber optic PLC (Planar lightwave circuit) splitter ọzọ a na-akpọ blockless fiber PLC splitter, bụ ụdị nke ngwa anya ike management ngwaọrụ na-chepụtara iji silica ngwa anya waveguide technology kesaa ngwa anya n'ókè si Central Office (CO) ka otutu premise ebe. Eriri optic splitter bụ ụdị nke ODN ngwaahịa adabara PON netwọk na ike ga-arụnyere na pigtail cassette, ule ngwá na WDM usoro, nke na-ebelata ohere ọrụ. ...
Eriri optic PLC (Planar lightwave circuit) splitter ọzọ a na-akpọ blockless eriri PLC splitter, bụ ụdị nke ngwa anya ike management ngwaọrụ na-chepụtara iji silica ngwa anya waveguide technology kesaa ngwa anya n'ókè si Central Office (CO) ka otutu premise ebe.
Eriri optic splitter bụ ụdị ODN ngwaahịa adabara PON netwọk na ike ga-arụnyere na pigtail cassette, ule ngwá na WDM usoro, nke na-ebelata ohere ọrụ.
Ntinye ntinye dị ala (IL)
Obere ala na-adabere na ọnwụ (PDL)
Kọmpat Ọdịdị ekwe ka etinyere na dị iche iche nchupu igbe
Mfe na ala na-eri FTTH echichi
Ezigbo nkwụsi ike gburugburu ebe obibi
Ọrụ ntụgharị (nm)
Okpukpo eriri anya, mm mmmm
Ngwa anya eriri ụdị
Ntinye ntinye (dB)
Mgbasa Ozi Na-adabere Adị (dB)
Wevelength dependent Loss (dB)
Ilaghachi ọnwụ (dB)
Ọnọdụ okpomọkụ ℃
-20 ruo 85
Nchekwa okpomọkụ ℃
-40 ka 85
Ngwa anya eriri ogologo (m)
Ime ụlọ na n'èzí ụzọ FTTH echichi
Neti anya na-agafe agafe (PON)
Ngwa anya eriri N'ịchọpụta usoro
Na blockless PLC splitter nwere ike ikwe ka otu netwọk GPON nwere ike ịkekọrịta n'etiti ọtụtụ ndị debanyere aha ma nye ndị na-enye ọrụ ohere iji mee ka ngwa ngwa bandwidth. Ogwe a na-enweghị ihe mgbochi na-egosi obere nha, nke bụ nhọrọ dị n'etiti nbelata olu na nchekwa eriri nwere ntụkwasị obi. Okwesiri maka ntinye na nhazi usoro gị na imepụta PLC splitter anyị na-enye bụ: 1 × 2, 1 × 4, 1 × 8, 1 × 16, 1 × 32,1 × 64.
Ngwungwu nke PLC splitter a dị mfe katọn igbe. Usoro ngwugwu pallet dịkwa, lelee nkọwa ndị ọzọ gbasara ahịa anyị.
Usoro Jera na-arụ ọrụ dịka ISO 9001: 2015, nke a na-enye anyị ohere ire karịa mba 40 na mpaghara dịka CIS, Europe, South America, Middle East, Africa, na Asia.
Anyị na-enye eriri ngwa anya eriri ngwa maka FTTH rụrụ na-enye dum kit nke ngwa ka ndị ahịa anyị, dị ka eriri optic cable, eriri clamps, eriri mgbodo, eriri optic nchupu igbe, ihe nkwụnye, patch cord and so on.
Mmadụ Bịa kpọtụrụ anyị banyere Eriri optic PLC splitter price.
Nke gara aga: Mini PLC Kaseti splitter
Eriri Optic USB Splitter Factory
Eriri Optic USB Splitter Manufacturers
Eriri optic PLC splitter price
Eriri optic nkesa igbe, Fodb-8
Eriri optic PLC Cassette splitter
Ftth nchupu igbe FODB-8A
Eriri optic nkwụnye, Single-mode
Mini PLC Kaseti splitter